पौने दुई करोडको लगानीमा अत्याधुनिक र सुविधायुक्त नेशनल ल्याव सञ्चालनमा – Pahilo Page
पौने दुई करोडको लगानीमा अत्याधुनिक र सुविधायुक्त नेशनल ल्याव सञ्चालनमा
धनगढी । कैलालीको धनगढीमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ । धनगढीको सेती अञ्चल अस्पताल अगाडि नेशनल प्याथ ल्याव एण्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले नेशनल ल्यावको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा मन्तव्य राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले सुविधासम्पन्न ल्याव सञ्चालनमा आएपछि यसक्षेत्रका बासिन्दाले थप सेवाहरु पाउने बताए । “अब जाँचका लागि अन्यत्र जानु परेन यसक्षेत्रका जनताले धनगढीमै सेवा पाउने भए” उनले भने, “ल्याव अनुगमनको जिम्मा पनि हाम्रै भएकोले आगामी दिनमा पनि सेवा सुविधा गुणस्तरीय होस ।”
झण्डै पौने दुई करोडको लगानीमा नेशनल ल्याव सञ्चालनमा आएको हो । बुटवलमा मुख्य शाखा रहेको सेन्टरले धनगढी शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । क्यान्सर, मारकर, हेपाटाईटीस कल्चर तुरुन्तै एचआईभी जाँच, निःसन्तान दम्पत्तिको जाँच, मुटु रोगीको जाँच, भिटामीन थाराईड लगायतका धेरै सेवाहरु दिने ल्यावका प्रवन्ध निर्देशक पवन जोशीले जानकारी दिए । स्थापना हुने भएको ल्यावले यहाँ नहुने जाँचहरु गर्नेछ । “अहिलेसम्म यहाँ नहुने जाँचहरु काठमाडौं, भारतका शहर लगेर जानुपथ्र्यो भने धेरै समय पनि लाग्थ्यो । अब सहजरुपमा तुरुन्तै सबै किसिमका जाँचहरु हुन्छन्” प्रवन्ध निर्देशक जोशीले भने, “स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय प्याथोलोजी सेवा सस्तो मूल्यमा पाइने छ । सुदूरपश्चिमका जनताले राम्रो गुणस्तरीय सेवा सस्तो र सहज रुपमा पाउने छन् ।”
धेरै जाँचहरु हुन नसकेर अहिले अन्यत्र जानुपर्ने र पठाउनुपर्ने वाध्यता यसक्षेत्रमा रहँदै आएकोमा अब त्यो समस्याबाट पनि विरामीहरुले छुटकारा पाउने सञ्चालकको दावी छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि करोडौंको लगानीमा स्थापना भएको ल्यावले यसक्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई थप बलियो बनाउन मद्दत मिलेको बताएका छन् । अब कुनै पनि स्वास्थ्य जाँचहरुका लागि कतै जानु नपर्ने र घरआँगनमै सेवा पाइने सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सूर्यवहादुर गुरुङले बताए । “अब हामीलाई पनि विरामीहरुको उपचार गर्नका लागि सजिलो भएको छ । नेपालगंज वा अन्यत्र पठाउँनु पर्दैन समयमै उपचार गर्न सकेमा विरामीहरुको ज्यान बच्छ”, डा. गुरुङले भने ।
चौथो शाखाका रुपमा धनगढीमा ल्याव स्थापना गरिएको हो । बुटवलपछि भैरहवा र दाङमा यसअघि नै नेशनल ल्यावको शाखा खुलेर सेवा दिइरहेको छ । आगामी दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउँदै विभिन्न जाँचहरु गर्नका लागि उत्प्रेरणा जगाउने सेन्टरका अध्यक्ष रुद्र कार्कीले जानकारी दिए । “हामीसँग अत्याधुनिक जनशक्ति र उपकरणहरु छन् । जसवाट सही रिपोर्ट विरामीहरुले पाउँछन्” कार्कीले भने, “हामी सबै जनालाई जनचेतना दिन्छौं कि विभिन्न जाँचहरु गर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रसँगै ग्रामीण भेगसम्म पनि पुग्छौं ।”
प्रकाशित मिति : शुक्रवार, भाद्र १०, २०७३ समय : २३:३६:५५ 1614 पटक पढिएको